सुदुरपश्चिम र प्रदेश २ मा माधवको पार्टी एमालेभन्दा ठूलो, कुन प्रदेशमा कसको संख्या कति ? « Sansar News
सुदुरपश्चिम र प्रदेश २ मा माधवको पार्टी एमालेभन्दा ठूलो, कुन प्रदेशमा कसको संख्या कति ?
१६ भाद्र २०७८, बुधबार १५:३१
भदौ १६, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)बाट छुट्टिएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दुई वटा प्रदेशमा एमालेभन्दा पनि बलियो देखिएको छ । प्रदेश २ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एमाले विभाजन हुँदा बहुमत सदस्यले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस) रोजेका हुन् ।
प्रदेश २ मा एमालेका १९ सांसदमध्ये १३ जनाले नेकपा (एस) रोजेका छन् । योसँगै एमाले भने प्रदेश २ मा ६ सांसदमा खुम्चिएको छ ।
प्रदेश २ मा सांसदहरु गोविन्द न्यौपाने, मञ्जु कुमारी यादव, बेची लुङ्गेली, अशोक यादव, सीता गुरुङ्ग, मदनसिंह श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार यादव, रवीन्द्र बैठा, सुन्दर विश्वकर्मा, शत्रुधन महतो र डिल्ली उप्रेतीले एमाले छाडेका हुन् ।
यता, सुदुरपश्चिममा पनि एमालेका २५ सांसदमध्ये १३ सांसदले नेकपा (एस) राजेका छन् । सांसदहरु दिर्घ सोडारी, पूर्णा जोशी, लालबहादुर खड्का, बलबहादुर सोडारी, अमरबहादुर साउद, चुनकुमारी चौधरी, मना साउद, तारा लामा तामाङ, अर्चना गहतराज, कुलवीर चौधरी, सुशीला बुढाथोकी, दुर्गा कामी र माया भट्टले नेकपा (एस) रोजेका हुन् ।
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको प्रभाव क्षेत्र मानिएको सुदुरपश्चिममा नेकपा (एस)भन्दा एमाले कमजोर देखिएको छ । तत्कालिन समय एमालेको संस्थापन तर्फ ७ जना र माधव पक्षतिर १८ जना सांसद खुलेका थिए । तर पछिल्लो विभाजनको अवस्थासम्म आउँदा रावलको प्रभावले ५ जना सांसद भने एमालेतिरै फर्किएका छन् । तथापि बहुमत सांसद भने नयाँ पार्टीतिरै देखिएका छन् ।
विभाजनकै कारण प्रदेश १ र बागमतीको सरकार जोखिममा
अहिले प्रदेश १ र बागमतीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । दुवै ठाउँमा एमाले विभाजन हुँदै गर्दा माधव पक्षलाई छाडेका नेताहरु मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश १ मा भीम आचार्य मुख्यमन्त्री छन् भने बागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य । तर, एमाले विभाजनसँगै दुवैको सत्ता संकटमा पुगेको छ ।
५१ सांसद भएको प्रदेश १ मा १० सांसदले एमाले छाडेका छन् । १० सांसदले नेकपा (एस) रोजेसँगै एमाले ४१ सांसदमा सीमित भएको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ४१ संख्या बहुमतका लागि पर्याप्त छैन् ।
त्यसैगरि बागमतीमा पनि १२ सांसदले नेकपा (एस) राजेका छन् । १०९ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५६ सांसदसहित बहुमत अवस्थामा रहेको एमाले ४४ सिटमा खुम्चिएको छ । जससँगै शाक्य नेतृत्वको सरकार पनि टिक्न मुश्किल देखिएको छ ।
कर्णालीमा कमजोर देखिएको नेकपा (एस) लुम्बिनी र गण्डकीमा नगन्य
कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता जोगाउने ४ सांसद यसअघि नै कारबाहीमा परेका थिए । शाहीको सत्ता जोगाउने प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढा नेकपा (एस)को प्रदेश कमिटीमा छन् ।
उनीहरु बाहिरिएपछि तीन जना प्रदेश सभा सदस्यले मात्रै एमाले छाडेका छन् । मुगुका चन्द्रबहादुर शाही, जुम्लाका पदम रोकाय र रुकुमकी देवी ओली नेकपा (एस) तिर खुलेका हुन् ।
चार सांसदलाई गरिएको कारबाही पछि १६ सांसदमा खुम्चिएको एमाले तीन सांसदले छाडेसँगै १३ सांसदमा सीमित भएको छ । तथापि कर्णाली एमाले पहिलो शक्तिको रुपमा भने देखिएको छ ।
यता लुम्बिनीमा एमालेकी एक प्रदेश सभा सदस्यले मात्रै नेकपा (एस) रोजेकी छिन् । समानुपातिक कोटाबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेकी पाल्पाकी रमा घर्ती मगरले नेकपा (एस) रोजेकी हुन् । मगरको अनुपस्थितिसँगै एमाले अब ३७ सदस्यमा सीमित भएको छ ।
यता गण्डकीमा भने हालसम्म माधव नेतृत्वको पार्टीमा कुनै पनि सांसद खुलेका छैनन् । पार्टी विभाजन अघि माधव पक्षमा देखिएका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा पनि पछिल्लो समय एकताको पक्षमा लागेका छन् । उनले खुलेरै पार्टी विभाजनको विरोध गर्न थालेका छन् । ६० सदस्य भएको प्रदेशसभामा हालसम्म एमालेसँग २८ सांसद देखिएका छन् ।
किन नेताहरुको घर–घर चाहार्दै छन् विप्लव ?
माधव पक्षमा नगएका सांसदले पनि किन छाडे ओलीको…